ShweMinThar: Arnold Schwarzenegger Body Building - What Is His Secret?
Arnold Schwarzenegger Body Building - What Is His Secret?
အာနိုးရဲ့ ကြွက်သားတက်နည်း လျှို့ဝှက်ချက်
အာနိုးဆိုတာ တစ်ခါက စင်္ကြာဝဠာမောင်ပါ။ အခုတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူဖြစ်နေပါပြီ။ သူရဲ့ တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းက ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အောင်မြင်မှု၊ကြွက်သားတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်နည်းအကြောင်း စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ သိအောင်ဝေငှလိုက်ရပါတယ်
အာနိုးက သူ့ရဲ့ဘော်ဒီလျှို့ဝှက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုဆိုဖူးတယ်။ ‘ ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်ဆန္ဒလှုံ့ဆော်မှု အတွက် အားကတော့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရမှာ။ သူများဖန်တီးပေးမှာမဟုတ်ဘူး’။ နောက်တစ်ခုကတော့ ‘ကာယလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာဟာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သုတေသနပြုလုပ်တာနဲ့အတူတူပဲ’ဟုဆိုပါတယ်။
အာနိုးဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွက်သားတက်ဖို့ လေ့ကျင့်တာတောင်မှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုနဲ့ ချဉ်းကပ်တာကို တွေ့ရတယ်။
အာနိုးဟာ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး ရောစပ်ပြီးလေ့ကျင့်လေ့ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်နေ့တည်းနဲ့ နှစ်ခါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာရှိတယ်။ တစ်ခါလုပ်ရင်လည်း အကြိမ်ရေများများလုပ်လေ့ရှိတယ်။ အနည်းဆုံးခြောက်ကြိမ်ကနေ ၁၀ကြိမ်အထိ ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းအတွက် အကြိမ်ရေ၂၀ ထိတောင် လေ့ကျင့်တဲ့နေ့တွေရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါက အာနိုးရဲ့စတိုင်လ်ပါ။ သူ့ရဲ့လေ့ကျင့်ဟန်ပါ။ သူ့ရဲ့လေ့ကျင့်ဟန်အတိုင်း စဦး ကာယသမားတွေလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ခုမှစပြီး ကစားမလို့ပါဆိုတဲ့ ယောက်ျားလေးများအတွက် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာကတော့....။
စဦးလေ့ကျင့်သူများအတွက် အာနိုးက လေ့ကျင့်စလူငယ်တွေကို အမြဲသတိပေးတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ မြန်ဖို့မလိုဘူး။ နှေးနှေးနဲ့စပြီးလေ့ကျင့်တာက ပိုပြီးတာထွက်ကောင်းတယ်တဲ့။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲ အသေအချာဖြည်းဖြည်း နှေးနှေးနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်လေ့ကျင့်ပေးသွားဖို့ အာနိုးက တိုက်တွန်းထားတယ်။ နောက်ပြီး သတိပေးထားတဲ့အချက်တစ်ခုက စဦးလေ့ကျင့်တဲ့သူတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို လေ့ကျင့်ပါဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက် ၀င်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ အာနိုးဟာ သူ့စိတ်ကို ဘယ်လိုသွင်းပြီး အလုပ်လုပ်လည်းဆိုတော့ သူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေထဲမှာ အာရုံအားလုံးကို စိတ်နှစ်ထားပြီး သူလေ့ကျင့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုပဲ အာရုံနှစ်ထားတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါဟာ ဦးတည်ရာကို ပစ်မှတ်သဖွယ်သဘောထားတဲ့ မစ်ရှင်စိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်။ ဥပမာ – လက်မောင်း ကြွက်သား (Biceps) အတွက်လေ့ကျင့်တယ်ဆိုပါစို့။ သူ့လက်မောင်းကြွက်သားဟာ ကြီးထွားလာပြီ၊ ကြီးထွားနေပြီလို့ စိတ်ကူးထဲထည့်ရင်း လေ့ကျင့်တာလို့ဆိုတယ်။
ကာယကစားသမားတစ်ယောက်ဟာ အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သတိပြုရွေးချယ်စားသောက်နေထိုင် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာနိုးတို့ခေတ်တုန်းက ကစားသမားတွေဟာ အဲဒီလိုအတွေးမ၀င်ခဲ့ကြဘူး။ သိပ်လည်း မသိခဲ့ကြ ဘူးဆိုပဲ။ အခုခေတ်လို အားဆေးတွေလည်းမရှိဘူးတဲ့။ အခုတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မျှတအောင် စားသောက်နေ ထိုင်ခြင်း ဟာ တစ်နှစ်တာပတ်လုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စွာနဲ့ နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ၀န်ခံလိုက်တယ်။ အမှန်တော့ အစားအသောက်စားသောက်တဲ့ပုံစံဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတက်အောင် လေ့ကျင့်ရာမှာ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ဖြစ်တယ်။ လူပေါင်းများစွာဟာ သူ့ဆီလာပြီး ‘ခင်ဗျားလို ကြွက်သားရှိအောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ကို ညွှန်ပြပါ’ဆိုပြီးမေးကြတယ်။အဲဒီ့အခါမှာ အာနိုးက သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ နေထိုင်စားသောက်ပါလို့ဆိုပြီး အဖြေပြန်ပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ်လေ့ကျင့်နေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကာလတစ်လျှောက် သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ အဟာရများကို မှီဝဲသုံးဆောင်သင့်တယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့တယ်။ အသေးစိတ်ကတော့.......။
အာနိုးရဲ့ အစားအသောက်နှင့် အနားယူနည်း
၁။ တစ်နေ့ကို နည်းနည်းနဲ့ များများစားပေးပါ။(ငါးကြိမ်)
၂။ တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံးသုံးရက်အနားယူပေးရပါမယ်။
၃။ တစ်နေ့ကို ရှစ်နာရီအထက် ပိုအိပ်ပေးပါ။
၄။ သုံးနာရီတိုင်းမှာ ပရိုတင်း ၃၀ မှ ၅၀ ဂရမ်အထိ စားသုံးပေးပါ။
၅။ အမဲသားနဲ့ ၀က်သားအစား ကြက်သားနဲ့ ငါးစားပေးပါ။
၆။ သကြားကို ရှောင်ပါ။ သစ်သီးဝလံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားသုံးပေးပါ။
(တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ)
(၁) ခုံပေါ်ပက်လက်လှန်ပြီး အလေးမ – ငါးကျော့။ တစ်ကျော့လျှင် ခြောက်ကြိမ်ကနေ ၁၀ကြိမ်အထိ။
(၂) ရင်အုံရှေ့လက်စုဖြန့် (Flat Bench Fly) – ငါးကျော့။ တစ်ကျော့လျှင် ခြောက်ကြိမ်မှ ၁၀ကြိမ်အထိ။
(၃) Incline bench press ခြောက်ကျော့၊ တစ်ကျော့လျှင် ခြောက်ကြိမ်မှ ၁၀ကြိမ်အထိ။
(၄) ကြိုးဆွဲ (Cable crossovers) ။ ခြောက်ကျော့၊ တစ်ကျော့လျှင် ခြောက်ကြိမ်မှ ၁၀ကြိမ်အထိ။
(၅) Dips ငါးကျော့။
(၆) Dumbbell pullovers ငါးကျော့၊ တစ်ကျော့လျှင် ၁၀ကြိမ်မှ ၁၂ကြိမ်အထိ
(၁) Front wide-grip chin-ups ခြောက်ကျော့၊
(၂) T-bar rows ငါးကျော့၊ တစ်ကျော့လျှင် ခြောက်ကြိမ်မှ ၁၀ကြိမ်အထိ
(၃) Seated pulley rows ခြောက်ကျော့၊ တစ်ကျော့လျှင် ခြောက်ကြိမ်မှ ၁၀ကြိမ်
(၄) One-arm Dumbbell rows ငါးကျော့၊ တစ်ကျော့လျှင် ခြောက်ကြိမ်မှ ၁၀ကြိမ်အထိ၊
(၅) Straight-leg Dead lifts ခြောက်ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၅ကြိမ်။
(၁) ထိုင်ထ ခြောက်ကျော့၊ တစ်ကျော့လျှင် ရှစ်ကြိမ်မှ ၁၂ကြိမ်။
(၂) Leg presses ခြောက်ကျော့၊ ရှစ်ကြိမ်မှ ၁၂ကြိမ်အထိ၊
(၃) Leg Extensions ခြောက်ကျော့၊ ၁၂ကြိမ်မှ ၁၅ကြိမ်အထိ၊
(၄) Leg curls ခြောက်ကျော့၊ ၁၀ကြိမ်မှ ၁၂ကြိမ်အထိ၊
(၅) Barbell Lunges ငါးကျော့၊ ၁၅ကြိမ်။
ကဲကဲ.....တဲ့၊ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ကြံ့ခိုင်ကျန်းမာအောင်လုပ်ပြီး စိတ်ပျော်ရွှင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ သူငယ်ချင်းတို့ကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ။ မူရင်းမှာမပါတာလေးတွေ နှမ်းဖြူးရရင်တော့ အိပ်ရေးမ၀တာရယ်၊ အစားအသောက်မမှန်တာတွေဟာ ကာယအားကစားသမားတွေအတွက် တိုးတက်မှု ဆုတ်ယုတ်စေတာအမှန်ပါ။ ဒီတော့ အစားအသောက်မှန်မှန်စား၊ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်၊ ခွန်အားဆုံးရှုံးစေမယ့် အမူအကျင့်တွေကိုပြင်ပြီး ပျော်ရွှင်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
Ref: 8 Days A week Journal Vol.1, No (33), Oct 30 to Nov 6, 2009
You can search some of words from articles at http://www.shapefit.com